काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ ? सडकमै हुँदैछ स्वाब संकलन ! – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ ? सडकमै हुँदैछ स्वाब संकलन !
काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ ? सडकमै हुँदैछ स्वाब संकलन !
नागढुंगा कटेर थानकोट चेकपोष्ट आउनासाथ स्वास्थ्यकर्मीहरुले गाडी रोकेर पीसीआर परीक्षण गराउन भन्छन् । त्योसँगै गाडीबाट ओरालेर नाम दर्ताका लागि लाइनमा राख्छन् । स्वाव दिएपछि मात्रै उनीहरु गन्तव्यतिर लाग्न पाउँछन् ।
शनिबार शुरु भएको सडकमै स्वाव संकलन हुने यो सुविधा सोमबार साझसम्म २ हजार ३०७ जनाले उपयोग गरेका छन् । चौथो दिन मंगलबार दिउँसो थानकोटमा काठमाडौं भित्रिने पास बनाएका निजी सवारी साधनको लाम थियो । लामोदूरीका सार्वजनिक यातायात भदौ १ गतेबाट मात्र खुला हुँदैछ ।
नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत कृष्णप्रसाद अधिकारी सबै गाडीलाई प्यासेन्जर ओरालिरहेका छन् । मलाई पीसीआर परीक्षण आवश्यक छैन भन्नेहरु पनि धेरै थिए । तनहुँबाट स्कारपिओ जिपमा आएका ५ जनाले पनि स्वाव दिन मानेनन् ।
केहीदिन अघिसम्म पीसीआर परीक्षण नभई काठमाडौंका घरबेटीहरुले प्रवेश नै दिँदैनन् थिए । भाडाको कोठा वा फ्ल्याटमा पस्न र बस्न पनि पीसीआर परीक्षण गराउन टेकु अस्पताल पुग्नेहरु धेरै हुन्थे । तर, बाटामै परीक्षण गराउनुस् भन्दा पनि नमान्नेहरु भेट्दा कृष्णप्रसाद अधिकारी दिक्क देखिन्थे ।
‘अस्ति प्रहरीले गाडीबाट जर्बजस्ती झारेर परीक्षण गर्न लगायो भन्ने हल्ला पनि चलेछ’, अधिकारीले भने, ‘त्यसैले हामी परीक्षण गराउनुस् भनेर आग्रहमात्र गर्छौं । परीक्षण गर्दा सबैलाई राम्रो हुने भए पनि धेरैजना अनिच्छुक भेटिन्छन् ।’
परीक्षणको आवश्यकता बुझ्नेहरु भने बाटैमा स्वाव दिन पाउँदा खुसी भएका छन् । सवारी चालकहरुलाई पीसीआर परीक्षण गराउन नभने पनि पाएको सुविधा उपयोग गरौ भनेर आफै लामवद्व हुनेहरु पनि देखिए ।
मकवानपुरबाट मोटरसाइकलमा आएका दुई युवक पनि सडकमै पीसीआर परीक्षणको सुविधा पाउँदा खुसी देखिए । दुईमध्येका रमेश कार्कीले भने, ‘अस्ति भाइ काठमाडौं आउँदा घरबेटीले धेरै तनाव दिएछन्, हामी चाहिँ टेकु अस्पताल नगई तनावबाट जोगिने भयौं ।’
घरबेटीलाई देखाउन उनले स्वाव दिँदै गरेको तस्वीर मोवाइलले खिचेका छन् ।
मंगलबार थानको स्वाव दिनेहरुमा एउटा चिन्ता थियो– स्वाब दिइरहेका बेला पनि कतै कोरोना त सरेन ?
हुन पनि दोहोरिलत्त गाडी चलिरहेको ठाउँमा स्वाव संकलन हुँदै गर्दा मानिसहरुको दूरी कायम भएको थिएन । नाम टिपाउने लाइनमा एक मिटर होइन एक फिट पनि दुरी कायम हुन गाह्रो अवस्था थियो ।
“स्कुल मा यी दुई प्रेम जोडिले यस्तो हर्खत गरे पछि भिडियो भयो भाइरल”(हेर्नुहोस भिडियो)
य’स्तो अच’म्मको पुजा पनि हुन्छ र? हेर्नुहोस् भि’डियो !